Hita ny fanafodin'ny Coronavirus Hiverina tsikelikely ny asa sy ny fianarana
Raha manasitrana olona maro ny chloroquine dia tsy misy antony tsy hahafahantsika manasitrana izany amin’ny alalan’ny raokandro Malagasy.
Ankehitriny dia afaka milaza isika fa nahomby ary nahitam-bokatra ny andrana nataontsika amin’ilay fanefitra hoentintsika misoroka hiatrehana ny coronavirus, izay novokarin’ny IMRA. Nahitana vokatra tsara amin’ireo nararin’ireo nararin’ny covid-19 teto Madagasikara izy io, ary afaka mametra sy mampihena ny fiantraikan’izany amin’ny vantan’olombelona, hoy I Andry Rajoelina Filoham-pirenena tamin’ny kabariny omaly halina. “Covid Organics” no anarana nomen’ny siantifika azy, ka efa ao anatin’ny famokarana isika izao. Anio alatsinainy fampahafantarana azy amin’ny fomba ofisialy azy io. Hanao andrana amina toeram-pitsaboana na hanao “essai Clinique” amin’ity herinandro ity. Ny zava-maniry “artemisia” no akora fototra io, izay ny Pr Ratsimamanga no nampiditra azy voalohany tamin’ny taona 1975. Isika no mamokatra sy manana tahiry betsaka aty Afrika sy manana ny kalitao tsara indrindra maneran-tany. Manamafy ny fiarovana ny vatana, misoroka sy miaro amin’ny tsimokaretina, miaro ny avokavoka,…, hoy I Andry Rajoelina. .
Ezahina atomboka tsikelikely ny famerenena ny andavandrom-piainan’ny olona, ka amin’ny 6 maraina hatramin’ny 1ora tolakandro ny asa aman-draharaha. Ireo monina eto Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, dia tsy afaka mivezivezy miala amin’ny faritra misy azy. Mihantra ny tsy fahafaha-mivezivezy amin’ny alina (9ora alina-4ora maraina). Tsy maintsy manao arovava avokoa, ary izay tsy manana dia hisy fizarana maimaimpoana, dia hisy fizarana eny amin’ny fokontany mandritra ny herinandro. Ireo olona rehetra mivoaka ny trano ka tsy manao arovava manomboka ny 27 aprily dia ho voasazy hanao aza mahasoa ny besinimaro: mamafa, manadio,… Ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana ofisialy, dia miverina an-tsekoly na miankina na tsia. Ny Terminale sy ny 3ème dia ny faha-22 aprily, ny 7ème dia ny faha-27 aprily. Hizarana arovava avokoa ny mpianatra rehetra. Hisotro ny Covid Organics avokoa, mpianatra iray dabilio iray. Ho an’ny mpiasam-panjakana, dia hapetraka ny “service minimum” ka ny minisitra sy ny ekipany no mandrindra izany. Miverina mandray ny asany ireo miasa tena manomboka ny 22 aprily fa tsy maintsy manaja ny lamina rehetra. Olona 5 raha be indrindra raha efitra kely, elanelana iray metatra. Mitsahatra amin’ny 1ora tolakandro. Afaka misokatra ny restaurant hatramin’ny 1ora, ary mitsinjara sakafo any amin’izay manao kaomandy aorian’izay. Ny Fiarakaretsaka dia mahazo mitondra olona 3, tsy mahazo asiana olona ny seza volamena ho an’ny taksibe, tsy maintsy manao arovava na ny mpandeha na ny mpamily, 18 raha be indrindra ny olona entina. Mbola miato avokoa ny taksibrosy miainga any eto Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa. Mbola voarara ny famoriam-bahoaka, fety, fanatanjahantena mahavory olona mihoatra ny 50,….